Ny lalana nizoran’ny vondrom-piarahamonina miditra aterineto: Avy any amin’ny telecentres nankany amin’ny tambajotram-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2018 5:31 GMT
Ity lahatsoratra manaraka ity no faharoa amin'ny fizarana telo nosoratan'i Florencia Roveri avy ao amin'ny Nodo TAU ary nivoaka voalohany tao amin'ny APC News ka navoaka eto indray noho ny fiarahamiasa ao amin'ny Association for Progressive Communications sy ny Rising Voices. Vakio ato ny lahatsoratra voalohany momba ny telecentres sy ny lahatsoratra faharoa momba ny tambajotram-piarahamonina.
Ao Meksika, nanampy tanàna miisa 17 ao Oaxaca ao atsimo andrefan'ny firenena ho afa-miserasera ny asan'ny Rhizomatica. Vitan-dry zareo izany tamin'ny fananganana rafitra telefaonin-tsela sy ny fampidirana tetikasam-piarahamonina tompotany niaraka tamin'ireo olona nanoka-tena ho amin'ny fifandraisandavitra tamin'ny fampiasana ny rafitra misokatra Rhizomatica, izay nomena ny maridrefy. Tsangambato eo amin'ny fahafahan'ny vondrom-piarahamonina mitelefaonina izany sady zavabita goavan'ilay fifandaminana.
Mandresy lahatra i Huerta fa tahaka ny mpanome tolotra aterineto (ISP na FAI) kely tamin'ireo andro voalohany nisian'izany, izay nanolorany servisy aterineto tamin'ny fikambanana sy fifandaminana isan-karazany koa ny tambajotram-piarahamonina. “Te-hampitaha ireo tambajotram-piarahamonina amin'ireo mpanome tolotra aterineto izay natolotry ny mpandraharaha madinika tamin'izany fotoana izany aho. APC no mpisava lalana tamin'izany saha izany sady naroina tamin'ny kinasa toy izany. Mila miverina amin'izany zava-niainana izany ianao, mahatakatra izany nitranga, ary ny fomba nandemen'ny tsena azy ireny. Hafa dia hafa ny tantaran'ireo tambajotram-piarahamonina ireo satria miresaka fandrakofam-potodrafitrasa isika izay maharitra kokoa sady tsy nivoatra be tahaka ny rindrambaiko.”
12 Desambra 2020Mediam-bahoaka